JINGHPAW KASA: လွတ်လပ်ရေးဖခင်သဖွယ်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခဲ့သည့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
1946 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ (28) ရက်နေ့မှာ မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ ရောက်လာပြီး နိုဝင်ဘာလ (29) ရက်နေ့မှာ ကချင်ခေါင်းဆောင်များနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်-(ခင်ဗျားတို့ကချင်လူမျိုးတွေ တိုးတက်ချင်ရင် ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေနဲ့ အတူလွတ်လပ်ရေးယူရအောင်၊ မတိုးတက်ချင်ရင်တော့ အင်္ဂလိပ်ပြောစကားကိုနားထောင်ကြပါ။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ခင်ဗျားတို့ ကချင်ပြည်ကို ခင်ဗျားတို့ကချင်တွေသာ အုပ်ချုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေ လာအုပ်ချုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ဒေသကို ခင်ဗျားတို့စိတ်တိုင်းကျ ကြိုက်သလိုစီမံအုပ်ချုပ်ကြပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ပြည်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကာကွယ်ရေး၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဘဏ္ဍရေးစသည့် ကိစ္စတွေကိုတော့ ကချင်ဝန်ကြီးများပါဝင်တဲ့ ဗဟိုအစိုးရအဖွဲ့က တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဘာသာရေးနှင့် ပါတ်သက်လို့လည်း ခင်ဗျားတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဘာသာကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်။ စစ်တပ်နဲ့ပါတ်သက်ရင်လည်း ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ကချင်တပ်ကို သီးခြားတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးမယ်၊ တန်းတူညီမျှရေးမှာလည်း ဗမာတစ်ကျပ်၊ ကချင်တစ်ကျပ် အခွင့်အရေးရမယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကို မကောင်းဘူးလို့ထင်ရင် လက်တွေ့ပေါင်းကြည့်ပါ။ အခုခေတ်ဗမာတွေဟာ အရင်ခေတ်ဗမာတွေနဲ့ မတူတော့ဘူးဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ယုံပါလို့ပြောချင်ပါတယ်) စသည်ဖြင့် ကချင်တွေကို စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့သည်။ ကချင်တွေကလည်း လက်တွေ့မှာ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို မစဉ်းစားဘဲ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အပြောမှာ ရေစုန်မျောခဲ့ ကြရပြီ။ တစ်ကယ်ဆိုရင် အချို့သောကချင်အမျိုးသားများဟာ ဗမာတွေနဲ့အတူတူ လွတ်လပ်ရေးရယူမှုကို သဘောမတူခဲ့ကြပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအချိန်တုန်းက အင်္ဂလိပ်အစိုးရ၏ တောင်တန်းဒေသ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး H.N.C Stevenson သည် 1946 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (2-3) ရက်နေ့များတွင် ကချင်ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီး -(ခင်ဗျားတို့ကချင်တွေကို သီးခြားကချင်ပြည်သတ်မှတ်ပေးပြီး သီးခြားလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။
anwar hashim said...
အေး ငယ်ငယ်ကတော့ ...အဖေ ပြောလို့ ..ဒီသမိုင်းကို ကြားဖူးတယ်။
So, We needed to fight Back To Myanmar (Burma) Gov; ?
want reunion? Never thought about that Wake Up "Kachin" You have way chance to stand your own foot(country).
Mike Phill said...
ဒီလိုအဆင့်မရှိတဲ့ ပိုါစ်ကိုအမြန်ဖြုတ်ချလိုက်ပါ။ ဒါတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း သွေးခွဲနေတာ။။စကောလောက်မှ စောက်မနက်တဲ့ အကြံနဲ့ . ..
fuck you guy. you madeawrong history on ur own blog http://jinghpawkasa.blogspot.com
Whatarude comments. Aung San was not National leader for Kachin neither ethnic in Burma. You can say in your world, if he did something.
But What had he done for you? You should say thankyou to this post. Blow your mind if you still believe in Prehistory where you did learn Burma Military academy."READ TIME MAGAZINE- Ethnic killer". What the fuck Man, you dickhead yan9oo, Mike.
Well suchapity that most Burmese people never heard this kind of true history....due to their lack of knowledge, stupidity and brain wash by the Burmese government in most of the time... They just know all the Fancy make up history of Aung San, Along Myin Tayar...etc..